Ojiji ịntanetị ndị na -eto eto - Gịnị bụ ihe egwu dị na ya? | Ndị Nne Taa
Susana godoy | 23/09/2021 14:00 | ọtụtụ
Teknụzụ ọhụrụ dị ebe a ka ọ nọrọ n'ihi nke a, ọ na -adịkarị ka ha nọrọ na ndụ anyị site na ihe mbụ n'ụtụtụ ruo mgbe anyị ga -arahụ ụra. N'iji ha eme ihe siri ike, ha dị mma mana, Kedu ka ojiji ịntanetị na -eto eto si emetụta ha? Kedu ihe egwu na -adịkarị?
Ọ bụ otu isiokwu a na -ekwukarị ma ọ dị ka ọ kwụsịghị iju anyị anya. Ya mere, anyị ga -eburu n'uche kedu ihe bụ ihe egwu kacha abịa n'ihu anyị na na ụmụ anyị nwere ike na -enwe, tupu o mechaa.
1 Kedu ka ịntanetị si emetụta ndị na -eto eto
2 Kedu ihe egwu dị na iji ịntanetị eme ihe na -adịghị mma
3 Kedu ihe ndị ntorobịa kacha eme na ịntanetị?
Kedu ka ịntanetị si emetụta ndị na -eto eto
N'ikwu okwu sara mbara, na ịmara ka esi eji ya eme ihe n'ụzọ ziri ezi, o doro anya na ịntanetị nwere ọtụtụ ihe dị mma. N'ihi na ndị na -eto eto ga -enwe ike ịchọta ụdị ozi niile maka ọmụmụ ha ma ọ bụ mụta ntakịrị ihe gbasara ihe na -agụ ha agụụ. Yabụ, na -akọwapụta isi mmalite nke ozi n'ozuzu, anyị nwere ike ịsị na anyị na -eche mmetụta dị mma ihu. Ma mgbe ụfọdụ ọ na -esi na aka. Ka ọ were ịntanetị nwere ike imetụta n'ụzọ adịghị mma. N'ihi ya, ndị nne na nna nwekwara ọrụ dị mkpa n'ịchịkwa mgbe na ogologo oge ha ga -ejikọ. Ọ dịkwa mkpa mmeghachi omume ha na -eme kwa ụbọchị yana karịa, ma ọ bụrụ na ebipụ njikọ ahụ nwa oge. Agbanyeghị na anyị niile maara mmeghachi omume ndị a. Ịga na ngwa nchedo nwere ike ịbụ otu ihe ị ga -eme.
Kedu ihe egwu dị na iji ịntanetị eme ihe na -adịghị mma
Inwe ike ịnweta ụdị ibe na ozi niile. N'ime nke anyị na -egosipụta ọdịnaya ime ihe ike, ọgwụ ike na echiche dị iche iche kpamkpam.
Nwere ike ịzụlite nsogbu uche sitere na iji ịntanetị eme ihe na -adịghị mma. N'etiti ha anyị na-egosipụta ịdị ùgwù onwe onye dị ala ma ọ bụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ọbụna nsogbu n'ime ezinụlọ.
Gwa ndị amaghị ama, ndị enyere ozi zuru oke ka ha nwee ike nweta nsogbu n'ọdịnihu.
Nweta ntakịrị site na mgbe gara aga, ọ na -adịkarị ka edebanye aha ha n'ọtụtụ peeji nke ha tinyekwara ozi nkeonwe n'ụdị n'ụdị, nke na -eme ka ekpughere ha nke ọma. Agbanyeghị na ọ bụ eziokwu na okwu nzuzo agbanweela nke ukwuu, onweghị onye na -echebe onwe ya pụọ ​​na wayo ụfọdụ.
Mmekpa ahụ site na soshal midia, ebe ha nwere ike ịnata ozi n'ụdị dị iche iche. Ihe nwere ike ịkpalite nsogbu dịka nke anyị kwuru maka inwe ugwu na ọtụtụ ndị ọzọ.
Mgbasa ozi niile nwere ike ibupu ha, nke na -eduhie eduhie na iji nweta onyinye, ka ha na -aga n'ihu na -ede data ha na ọbụlagodi mgbe ụfọdụ ha nwere nsogbu na kaadị kredit.
Maka ihe a niile, pịa ọgba aghara ọnọdụ uche ọ bụ otu n'ime nsogbu na -apụta ngwa ngwa.
Ịictionụ ọgwụ ọjọọ nwere ike bata na ndụ ndị na -eto eto, na -ahapụ ọrụ gị niile bụ isi.
Kedu ihe ndị ntorobịa kacha eme na ịntanetị?
A na -ekwu na ịchọ ozi bụ otu n'ime isi ihe dị na nwata ọbụla. N'ezie, ozi okwu dị n'okwu a dị oke sara mbara ma dịkwa iche iche. Mgbe ya, enwere nbudata egwu ma ọ bụ ikiri vidiyo ozugbo, nke yiri ka ọ bụ nnukwu ntụrụndụ ọzọ maka ndị na -eto eto. Egwuregwu na egwuregwu vidiyo n'ozuzu adịghị anya n'azụ na ọ bụ otu n'ime nhọrọ ndị kachasị mkpa, ebe ọ bụ n'ihi ngwa izi ozi ngwa ngwa, nkata dị ka amaara ha ka dị n'azụ. Mana ugbu a, ihe ọzọ dị egwu na -abịa na nke ahụ bụ na ụwa nke ịgba chaa chaa bụkwa otu n'ime ihe kachasị dị egwu maka ndị nọ n'afọ iri na ụma na ihe karịrị 25% emeela nzọ site na ịntanetị. Ụwa dị mgbagwoju anya ijikwa nke ọma!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndị nne Taa » Ezinụlọ » ọtụtụ » Iji ịntanetị ndị na -eto eto: Gịnị bụ ihe egwu dị na ya?